Ny fifandraisana misy eo amin'ny intelligence sy ny fluid executive | Fiofanana kognitive
Efa niresaka tamina tranga maro momba ny fahiratan-tsaina and of asan'ny mpanatanteraka, na dia famaritana ny fikarohana natao aza fahasamihafana lehibe sasany.
Mandritra izany fotoana izany, tsy azo ihodivirana ny fanamarihana ambaratongam-pifamoivoizana eo anelanelan'ny famaritana ireo rafitra teorika roa; Ohatra, ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mamaha olana dia ampiasaina amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny foto-kevitra sy famaritana ny asan'ny mpanatanteraka. Na izany aza, ireo fahaiza-manao roa ireo dia matetika manampy amin'ny fanazavana ny fihetsika izay faritanay matetika hoe "manan-tsaina".
Raha jerena io fitoviana misy eo amin'ny faharanitan-tsaina sy ny fahefana mpanatanteraka io dia ara-dalàna ny manantena fa ny voalohany dia faminaniana farafaharatsiny farafaharatsiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony hanantena isika fa rehefa mihamitombo ny fahombiazan'ny andrana dia misy ny fitomboan'ny isa amin'ny fanandramana handinihana ny faharanitan-tsaina.
Mikasika ny fanandramana ho an'ny fahefana mpanatanteraka, dia nanasongadina mpanoratra fa ny fitsapana izay manombana azy ireo amin'ny alàlan'ny asa sarotra kokoa (ohatra ny Ny fitsapana fampihenana an'i Card na ny Tilikambon'i Hanoi), tsy manana fahatokisana sy fahamendrehana izy ireo. Iray amin'ireo fiezahana fanta-daza indrindra hiezahana hamehezana io olana io ny fiasan'i Miyake sy ny mpiara-miasa izay nanandrana nanaparitaka ireo asany mpanatanteraka ho singa tsotra kokoa ary, indrindra, telo:
fanavaozana ny fitadidiana miasa;
Tamin'ny alàlan'ny fandalinana iray nalaza be natao tamin'ny olon-dehibe any amin'ny anjerimanontolo, ireo mpikaroka ihany dia nanasongadina ny fomba ifandraisan'ireto fahaiza-manao telo ireto fa toa azo sarahina ihany koa, ary koa naneho fa ho vitan'izy ireo mialoha ny fahombiazana amin'ny asa sarotra kokoa (ohatra, Tilikambon'i Hanoi ary ny Ny fitsapana fampihenana an'i Card).
Duan sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny 2010 dia nanapa-kevitra izy ireo fa hizaha toetra ny maodely Miyake koa amin'ny taonan'ny fampandrosoana ary, indrindra indrindra, amin'ireo olona izay eo anelanelan'ny 11 sy 12 taona. Ny tanjona dia ny hijerena raha toa ny fandaminana ny asan'ny mpanatanteraka mitovy amin'ny hita amin'ny olon-dehibe, izany hoe misy singa telo (fanakanana, fanavaozana ny fahatsiarovan-tena miasa sy fahalalahana) mifandraika nefa toa misaraka ihany.
Ny tanjona iray hafa dia ny Tombano ny fomba nanazavana ny tsikombakomban'ny fluid amin'ny alàlan'ny asany.
Mba hanaovana izany, ny mpanoratra dia nametraka olona 61 tamin'ny fanombanana ara-tsaina tamin'ny alalàn'ny Matrices mandroso any Raven, ary ny fanombanana ny asa kognita amin'ireo singa telo efa voalaza.
Mikasika ny tanjona voalohany, ny valiny dia nanamafy ny tena antenaina: ireo singa telo norefesin'ny asan'ny mpanatanteraka dia nifandraika nefa mbola azo sarahina ihany, ka mamerina izany, amin'ny tanora tanora kokoa, ny valiny navoakan'i Miyake sy ny mpiara-miasa 10 taona lasa izay.
Na izany aza, angamba mbola mahaliana kokoa aza ireo mifandraika amin'ny fanontaniana faharoa: iza amin'ireo singa ampiasain'ny mpanatanteraka no nanazava ny isa mifandraika indrindra amin'ny faharanitan-tsaina?
Saika ny fitsapana rehetra natao ho an'ny fahefana mpanatanteraka dia nampiseho fifandraisana lehibe (mirona hiara-miasa izy ireo) miaraka amin'ny isa amin'ny fitsapana ara-tsaina. Na izany aza, amin'ny "fanitsiana" ny sanda ho an'ny haavon'ny fifandraisana mifamaly eo amin'ny fanakanana, ny fahafaha-manao ary ny fanavaozana ny fitadidiana miasa, ity farany ihany no nijanona nifandray be tamin'ny tsiranoka (manazava momba ny 35%).
Na dia mifandray matetika amin'ny statistika aza, ny faharanitan-tsaina sy ny fahefana mpanatanteraka dia mitohy mipoitra ho fananganana teôria roa misaraka (na, farafaharatsiny farafaharatsiny, ny fitsapana ampiasaina hanombanana ny iray na ny fananganana hafa dia toa mandrefy fahaiza-manao samihafa). Na izany aza, Ny fanavaozana ny fahatsiarovana miasa dia toa singa iray amin'ny andraikitra mpanantanteraka mifandray akaiky amin'ny faharanitan-tsaina. Na izany aza, alohan'ny hamitahana ny tenantsika fa tsotra be ilay fanontaniana (angamba hoe ny fahatsiarovan-tena ambany dia mifandraika amin'ny faharanitan-tsaina ambany ary ny mifamadika amin'izany) dia tsara ny mandinika fa amin'ny santionany hafa noho ireo "antonony" dia mihasarotra ny raharaha. Ohatra, amin'ny aretina tsy miankina amin'ny fianarana manokana dia toa tsy misy ifandraisany mafy amin'ny IQ ny isa fahatsiarovana miasa. Zava-dehibe noho izany ny fiheverana ireo angona avy amin'ity fikarohana ity ho toy ny sakafo manan-danja ho an'ny eritreritra, nefa miambina hatrany fa tsy maika amin'ny fehin-kevitra.
Inona ny hakingan-tsaina sy ny fomba fiasan'ny IQ
Ankizy fanomezana: manavaka ny faharanitan-tsaina sy ny fahefana mpanatanteraka
Ny faharanitan-tsaina, ny saina ary ny fampisehoana akademika: inona no tena zava-dehibe?
Mozika, saina sy ekipa mpanatanteraka
Ampitomboy ny fahatsiarovana miasa hampitomboana ny faharanitan-tsaina: Tena mandeha ve izany?
Mahatonga anao ho hendry kokoa ve ny fandinihana mozika?
Duan, X., Wei, S., Wang, G., & Shi, J. (2010). Ny fifandraisana misy eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny faharanitan-tsaina amin'ireo ankizy 11 ka hatramin'ny 12 taona. Fitsapana ara-tsaina sy fanodinana modely, 52(4), 419.
Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). Ny firafitry ny faharanitan-tsaina amin'ny ankizy manana fahasembanana manokana amin'ny fianarana dia tsy mitovy raha ampitahaina amin'ny ankizy mivoatra matetika. fahiratan-tsaina, 52, 36-43.
asan'ny mpanatanteraka, fahiratan-tsaina, faharanitan-tsaina sy ny fahefana mpanatanteraka, fitadidiana miasa, fitadidiana fahatsiarovana sy faharanitan-tsaina, fahatsiarovana miasa sy IQ, qi
Ny fifandraisana misy eo amin'ny intelligence sy ny fluid miasa2021-08-222021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/la-relazione-tra-intelligenza-e-funzioni-esecutive.jpg200px200px
Andraikitra mpanatanteraka mangatsiaka sy mafana: inona no vinanin'izy ireo amin'ny hafa?Lahatsoratra, Function Executive, Function Executive, Memory Memory